शिक्षा Archives - Page 40 of 62 - NepalDut NepalDut
हुरीबतास र असिनापानीका कारण पर्वतका दुई विद्यालय पूर्णरूपमा भत्किएका छन्। बुधवार दिउँसो आएको ठूलो हुरीबतासका कारण पर्वतको कुश्मा नगरपालिका– १२ ठुलीपोखरीस्थित जनज्योति प्राविको चारकोठे भवनको पुरै छाना उडाउनुका साथै विद्यायको भवनमा समेतमा क्षति पुगेको छ। विद्यालयको छाना उडाएपछि विद्यार्थीको पढाई समेत प्रभावित हुने भएको छ। अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवसका कारण विद्यालय बन्द रहेकाले मानवीय क्षति हुन नपाएको प्रधानाध्यापक नरबहादुर जिटीले जानकारी दिए। उनका अनुसार विद्यालय तत्काल मर्मत गर्न नसकेमा पठनपाठन सञ्चालन… पुरा पढौ
विपदमा स्वास्थ्य इञ्जीनियरिङबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकायको आयोजनामा बिहिबारदेखि पोखरामा विपदमा स्वास्थ्य इञ्जीनियरिङ्ग विषयक तीन दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन शुरु भएको छ । सम्मेलनमा पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले विश्वविद्यालय ज्ञान र तथ्यहरु उत्पादनको थलो भएको बताए । विश्वविद्यालयबाट प्राप्त ज्ञानलाई नीतिगत रुपमा कार्यान्वयनमा राजनीतिक तथा विकास कार्यकर्ताहरु लाग्नुपर्ने बताए । पोखरा र आसपासका क्षेत्र पनि विपदको उच्च जोखिममा पर्ने भएकाले मेयर जिसीले सम्मेलनका विभिन्न निश्कर्षहरुलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता… पुरा पढौ
नेपालको शिक्षा, पर्यटन र संस्कृतिका क्षेत्रमा काम गरिरहेको साभ नेपाल नामक संस्थाको आयोजनामा पोखराका विद्यालय तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुका लागि लक्षित गरी मोटिभेसन सेमिनार भएको छ । पोखराका विभिन्न विद्यालयका पाँच सय विद्यार्थीहरु सहभागी भएको सो कार्यक्रमका प्रमुख मोटिभेटरका रुपमा डा. ताराजी थिए । के पढ्ने ? किन पढ्ने ? कसरी पढने ? कस्ता साथी बनाउने ? कस्तो बानी व्यहोरा अपनाउने ?लगायतका महत्वपूर्ण विषयमा अत्यन्तै रोचक प्रस्तुतिका साथमा सञ्चालन गरिएको… पुरा पढौ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सूचना प्रविधिमा आधारित शिक्षणका लागि ‘नमूना स्मार्ट विद्यालय’ को आज शुभारम्भ गरेका छन्। ‘डिजिटल नेपालः विकास र समृद्धिको आधार’ भन्ने नाराका साथ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले आयोजना गरेको दोस्रो राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले सो स्मार्ट विद्यालय कार्यक्रमको थालनी गरेका हुन। गण्डकी प्रदेशको कास्कीको विश्व शान्ति माध्यमिक विद्यालय यस कार्यक्रमको पहिलो सूचना प्रविधिमैत्री विद्यालय हुन पुगेको छ। काठमाडौँको कमलपोखरीमा आयोजित कार्यक्रममा… पुरा पढौ
विराटनगर महानगरपालिकामा भइरहेको विकास निर्माणका क्रममा खाल्डो खनेर छाडिँदा विराटनगर ७ स्थित आदर्श बालिका माविको पठनपाठन अवरुद्ध बनेको छ । महानगरपालिका ७ स्थित टेलिकम मार्ग निर्माणका क्रममा ठुला ठुला खाल्डो खनेर सडक धराप बनेपछि विद्यालयको पठकपाठक एक महिनादेखि प्रभावित बनेको हो । पानी परेपछि उक्त खाल्डो थप धराप बनेपछि विद्यार्थी नआउदा मंगलबार विद्यालयमा पठन पाठन नै हुन नसकेको विद्यालयका प्राचार्य धनश्याम पोखरेलले बताए । पैदल हिडेर पनि विद्यालयसम्म आइपुग्न सक्ने अवस्था नरहेपछि विद्यालयले… पुरा पढौ
उच्च हिमाली क्षेत्रतिर यार्सागुम्वा सिजन सुरु भएसंगै त्यस स्थानका विद्यालयहरु पनि करिव बन्द भएका छन् । यतिबेला यार्सागुम्बा संकलनमा व्यस्त देखिन्छिन् काँडा मावि कक्षा–९ मा अध्यरत कल्पना बोहरा। पढाइ होइन, यार्सागुम्बा कति र कसरी संकलन गर्ने भन्ने चिन्ताले सताइरहेको उनी बताउँछिन्। गतवर्ष ५ लाख ५३ हजार रुपैयाँबराबरको यार्सागुम्बा संकलन गर्दा परिवारमा निकै खुसी छाएको थियो। मेरी छोरी कल्पना होइन, लक्ष्मी हो भनेर आमाबुबाले भन्नुभएको थियो । यो वर्ष अझै बढी… पुरा पढौ
झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका–६ स्थित लक्ष्मी माविका सहायक प्रधानाध्यापक घनश्याम डाँगीले जारी कक्षा १२ को परीक्षा दिने तयारी गरेको रहस्य खुलेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा गोप्य सूचना पुगेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले अनुगमन गर्दा यस्तो रहस्य खुलेको हो। सहायक प्रधानाध्यापक डाँगीले सो विद्यालयमा भइरहेको परीक्षामा अर्जुनधारास्थित शनिश्चरे माविको परीक्षार्थी भएर परीक्षा दिने तयारी गरेका थिए। आफुले अध्यापन गराउँदै आएको विद्यालयमा रहेको परीक्षा केन्द्रमै परीक्षा लेख्ने तयारी गरिरहेको सूचना पाएपछि… पुरा पढौ
करिब १६ सय विद्यार्थी रहेको सरस्वती माविमा यसपालि २ सय विद्यार्थी थपिए । नयाँ विद्यार्थी सबैजसो निजी स्कुलबाट आएका हुन् । सबै कक्षामा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुने यस विद्यालयमा अधिकांश कक्षामा २ वटा र कक्षा ८, ९ र १० मा ३ वटा सेक्सन छन् । विद्यार्थी धेरै मात्र भएका छैनन्, टाढा, टाढाबाट आउने भएपछि स्कुलले बस सेवा सुरु गरेको छ । गोरखा ८ आहालेमा रहेको यो विद्यालयले दशकयता जिल्लामै उत्कृष्ट… पुरा पढौ
पोखरा महानगरले महिलालाई सशक्त बनाउन छुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । महिलालाई तालिम, शिक्षा, अनुदान, सचेतना जस्ता क्रियाकलाप समेटेर उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रम ल्याएको हो । पोखरा १७ मा मंगलबारदेखि शैक्षिक सहजता कार्यक्रम सुरु भएको छ । पोखराका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले ८२ वर्षीया विष्णुमाया अधिकारीलाई शैक्षिक सामग्री हस्तान्त्ररण गरी कार्यक्रम सुरुआत गरिन् । उनले मानव जीवनलाई शिक्षाकै अर्काे नामको संज्ञा दिइन् । समृद्धिको यात्रामा पिछडिएका महिलाका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको… पुरा पढौ